Abavelisi bamakhadi-Amakhadi eTshayina abaXhasi kunye neFektri
Ubulungu / ikhadi lekhadi
Ikhadi leshishini lengqondo lenziwe ngezinto ezintsha ze-PVC kwaye lilandela imigangatho ye-ISO 7816 yamazwe aphesheya okanye kwinqanawa okanye imilo ebunjiweyo.
Ikhadi leBhakhowudi yeNgqondo ubukhulu becala yenziwe nge-100% yempahla entsha yePV kwaye ilandela imigangatho yamazwe aphesheya ye-ISO 7816. IBhakhowudi, ikhowudi ye-QR inokwenziwa ngokwezifiso kwaye sinikezela ngeendlela ezininzi zokwenza umntu.
Ikhadi elibonisa ngengqondo, ikhadi elicacileyo leshishini, ikhadi elinqabileyo lenziwe nge-100% yempahla entsha ye-PVC kwaye ilandela umgangatho we-ISO 78116 wamazwe aphesheya.
Indawo yokukrwela kunye nokukrwela ubungakanani kunye nombala wokukrola / idiecut inokwenziwa ngokwezifiso. Sinikezela ngeendlela ezininzi zokwenza umntu.